ကြက်ကချင်ချက် | Wutyee Food House
wow sar chin tal… par par and mur mur ko cook pay like own ma
အေး ချက်ပေးလိုက်နော်.. ပါးပါးနဲ့ မားမား ကြိုက်မှာ သေချာတယ်
Thank u! Ma Wutyee…
You r so welcome sis! 🙂
Thazin Phyu says:
အရမ်းကြိုက် 🙂 Thank Sis!
Welcome par sis
Aye Aye Htoon says:
Thanks, Ma wutyee Iwill try
Khin Than Than Soe says:
Thank you Thamee.I would like to know about Kachin vegetable Cipa curry.
I will try to post Kachin Vegetable curry soon
Hi sis Wutyee.
I can’t get these ပင်စိမ်း၊ ဖက်ဖယ်ရွက် at here.
If don’t ve these recipes can I cook this curry?
And ဖက်ဖယ်ရွက် is the ” kalar pu-si-nan ” ?
Cuz, I see the photo, it’s alittle looks like “pu-si-nan”.
Actually smell is not same one. 🙂
i don’t know phet phae yet….
You can buy ဖက်ဖယ်ရွက် at သံဈေး
ချက်စားကြည့်ပြီးပါပြီ။ အရမ်းစားကောင်းပါတယ် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
I tried it today. So so yummy. Thz wutyee.
အစားထိုးလို့ရတဲ့ အရွက်ရှိရင် ပြောပါအုံး
ဖက်ဖယ်ရွက်က ကြက်ကချင်ချက်မှာ အဓိက ကျတယ်။ မရှိရင်တော့ ပင်စိမ်းရွက်သုံးပါ
အမ ဝတ်ရည် ဖက်ဖယ်ရွက်ကို ဘယ်မှာရနိုင်ပါလဲ။ တစ်ခါမှ မကြားဘူးလို့ပါ။ဘယ်လို အနံအရသာရှိလဲ။ သူကိုထည့်မချက်ပဲ အခြားအစားထိုးထည့်စရာရှိရလား။
ဖက်ဖယ်ရွက်ကို သံဈေးမှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ်
ညီမေ၇း… ချည်စော်ခါးသီးအစား မက်ကျည်း၇ည်သုံးလို့၇ပါတယ်နော်.. Australia မှာချည်စော်ခါးသီးက၇ှာမ၇ဘူးလေး..
ချဉ်စော်ခါးသီး မရှိရင် သံပရာရည်ထည့်လည်း ရပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ ရေးပေးပါ့မယ်.. bro
Hi Ma Wut Yee,
I really appreciate all your cooking recipes. I usually check your website to get cooking ideas.
I only want to highlight some minor mistakes about this dish.
I amaKachin. Authentic Kachin dishes are not cooked with oil and we do not use clay pots.
You have to mix the chicken with all ingredients and cook them together. Most Kachin dishes do not havealot of gravy cos we drink with yum soup during the meal.
But, your recipe is pretty close.. You just don’t have to fry chicken with oil.
I hope you won’t feel offense by this comment.
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူး bro။ ခုလို သေချာ ရှင်းပြပေးတာ။ ၀တ်ရည်က Moon bakery မှာစားဖူးတဲ့ ကြက်ကချင်ချက်ပုံမျိုး ချက်ထားတာမို့ပါ။ နောက်တစ်ခါဆို bro ပြောသလို ကြိုးစားပြီ ချက်ကြည့်ပါမယ့်။ Thanks 😉
Ma Shwe Yee says:
I bought the ur food magazine from city mart and try to cook at home.It’s working out well.That’s why check ur website today and
got new idea too..Thanks Sis..
By the way, I like to make Pizza this weekend and like to know what is DRY YEAST?Can you show meapic?
Thanks also sis!! Dry yeast ဒီလင့်မှာ ပုံနာမူနာ ကြည့်လို့ရပါတယ် https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFoGj-IRcFl3tuY6kk0rLqlIQplVhQFAMwOjTIVN7dgpty-8IU တခြား သိချင်တာရှိရင် မေးပါနော်…
မမ ဖယ်ဖယ်ရွက် မရှိရင် ဘာသုံးလို့ ရမလဲ ဟင် မေသူက မန်းလေးကပါ အစ်မ မေသူဝယ်နေကျဈေးမှာ ဖယ်ဖယ်ရွက် မရှိလို့ ပါရှင့် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမ
ဖက်ဖယ်ရွက် ပါရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့နော်။ မရှိရင်တော့ နံနံပင်၊ ပင်စိမ်းပိုထည့်ပြီ ချက်ပေးပါ sis 🙂
thanks for reply sis
အရမ်းကြိုက်​တယ်​ Sunday ချက်​စားမယ်​
ချက်​နည်းတင်​​ပေးတဲ့ အတွက်​​ကျေးဇူးပါ ခင်​ဗျ
ကျေးဇူးပါ အမ။ အမဆီက နည်းလမ်းတွေနဲ့ မိန်းမကို လက်စွမ်းပြနေတာကြာပေါ့။ 🙂
မြေအိုးထဲ ဘာလို့ပြောင်းထည့်ရတာလဲ။ မြေအိုးမရှိလည်း ကြက်သားလုံးထားတဲ့ အိုးနဲ့ ချက်လည်း ရတယ်မို့လားအမ။
ဟုတ်ကဲ့။ မြေအိုး မရှိလည်း ချက်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မြေအိုးထဲ ထည့်ချက်တော့ အပူအကြာခံတာမို့ပါ။
ဖက်ဖယ်ရွက် အနံ့မကြိုက်ရင် နောက်တခါချက်ရင် လျှော့ထည့်ပြီ ချက်ရင်ပါတယ်.. 🙂
Cecilia Shwe says:
Your cooking methods is really good. Thank you so much for posting the wonderful recipes on the Web. I really appreciate your wonderful and delicious cooking methods.
Could you please tell me where can I buy your cooking book in the United States?
You really haveagood heart. May God always bless you and keep you success through your whole life! Thanks again! Haveagood day!
Thanks you too 🙂 In Us, you can’t buy my cooking book. If you want to buy online, you can buy here: http://myanmarbookshop.com/MyanmarBooks/BookDetails/26059/.. 😀
what is the english name of Phat Phal Ywat? THank you sis.
Thone Mhu Eain says:
Laksa leaves or polygonum leaves လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ မမလု နဲ့ မိုးကောင်းသူတို့က ပြောထားပါတယ်..။
thanks your posts
Khaing wai says:
AMA wutyee. how to call pin sain in English?
ပင်စိမ်း = basil leave…
Aeint Lay says:
Myay Oae ma tone bai chat yin yaw phit lr sis yay
Let me share phad phae = laksa. Leave=Cambodian mint= Vietnamese coriander
Laksa leaves or polygonum leaves လို့လဲခေါ်ပါတယ်တဲံ..။
Ma ဖကျဖကျရှကျဆိုတာ ဘာလဲ
အရမ်းကြိုက်လို့ ခဏခဏ ကိုချက်စား တယ် အမ ရေ ။ ကျေးဇူးပါနော်
ဝတ်ရည်ရေ မမျိုးဒီနေ့ ညီမနည်းနဲ့ ကြက်ကချင်ချက် ချက်ဖြစ်တယ်။ Ingredient တော့အစုံမရှိဘူးပေါ့နော်။ Recipe အတွက် ကျေးဇူးနော်။
mu mu aye(Lisa) says:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဖက်ဖယ်ရွက်ကဗီယက်နမ်mintပါလား။စါးသောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားပါသလား။ဗမာပြည်လာရင်လာပါမယ်။With Metta ,Nwe Nwe Oo.
Myo Thein Lin says: